Qaphela uyaqolwa | News24
PHOTO: nokuthula khanyile UKapteni Khosi Khonjelwayo.
AMAPHOYISA asekhiphe isexwayiso sokuba abantu baqaphele bangabi yizisulu zemikhonyovu eqhubekayo maphakathi nedolobha laseMgungundlovu.
Ekhuluma ne-Maritzburg Echo, oyibamba lomkhulumeli wamaphoyisa esiteshini samaphoyisa akuLoop Street uKapteni uKhosi Khonjelwayo uthe liya ngokunyuka izinga lomkhonyuvu wamakhadi asebhange, abaphrofethi mbumbulu kanye nabagwaziselwa imisebenzi.
UKapteni Khonjelwayo uthe izigebengu zinendlela yokuheha izisulu ezigcina zilahlekelwe izindodla zemali ngalemikhonyovu.
Phakathi kweminye yemikhuba athe ingenisile owokuhehwa kwabantu ezitolo zokudla noma zezingubo.
“Bangazithola bedidiswa umuntu wesifazane noma owesilisa ongabatshela ukuthi unolayini ngaphakathi noma wazi imenenja ephethe engabatholela izimpahla ngamanani aphansi.
“Emuva kwalokho bakutshela ukuthi shiya isikhwama sakho nabo ungene ngaphakathi ukhethe impahla oyifunayo ngesikhathi usengaphakathi bakhale bemuke nesikhwama sakho.”
Uthe omunye umkhonyovu odle lubi kulelidolobha owabantu abathola ngemali emgaqweni.
“Sixwayisa abantu ukuthi bangahambe becosha oplastiki ababathola phansi abanemali. Kunomuntu ozowisa uplastiki onemali phambi kwakho bese ethi kuwena nizocazelana ngoba niyithole nobabili.Uzothi usajatshuliswe yilokho bese kuqhamuka abanye abantu bezenza amaphoyisa bakuthathe bahambe nawe bese bekuphoqa ukuthi ukhiphe yonke imali onayo.”
UKapteni Khonjelwayo uthi lamaphoyisa mbumbulu abe esenika isiZulu imvulophu athi imali ayifake phakathi nokuthi uma uvula ufice kugcwele amaphepha.
Uphinde waxwayisa ngabantu abakhipha imali uma bethenjiswe imisebenzi.
“Akekho umuntu ekufanele umnikeze imali kadrink ukuze uthole umsebenzi wokuba yiphoyisa, ujele noma umhlengikazi. Uma kukhona umuntu okuthembise umsebenzi kodwa wathi gwaza hamba uyobika emaphoyiseni ngoba uma ukhokha ungabekwa icala lenkohlakalo.”
Uthe amalunga omphakathi kufanele aqaphele nabaprofethi bamanga abathembisa ukuphindaphinda imali.
“Isikhathi esiningi laba-profethi kusuke kungabantu bangaphandle abafike kuleli bezokwenza ubugebengu besebenzisa izinkoleloze.
“Siyanxusa ukuthi abantu bangahambi beyobabheka labaprofethi futhi bangawathathi amapheshana akhishwa emgwaqweni kodwa bathandaze kuNkulunkulu ukuthi abaxazululele izinkinga zabo okanye bacele usizo kubammeli abasemthethweni.
“Ungavumi badlale ngawe bathi bazocela amadlozi akho abanike imali yakho.”
Obunye ubugebengu obudlangile obokuqolwa kwabantu uma besebenzisa imishini yokukhipha imali.
“Okokuqala bashintsha iskrini kwi-ATM ngokufaka ikhadi lokukhokhela umakhalekhukhwini.
“Bese belikhipha lelikhadi ngesikhathi umshini usalinde eminye imiyalelo. Basuke kwi-ATM bese belinda isisulu sabo ukuthi sifake ikhadi kwi-ATM.”
Uthe umshini awube usavuma ukuthi isisulu siqhubeke nokukhipha imali. Nokuyilapho isigebengu singenelela khona sitshele isisulu ukuthi naso sike sabhekana nenkinga efanayo phambilini.
“Isigebengu sibe sesitshela isisulu ukuthi sicofoze izinamba eziyimfihlo ukukhipha imali.Kube sekuqhamuka isigebengu sesibili esididisa isisulu bese sikhipha ikhadi kwi-ATM liyosetshenziswa komunye umshini isisulu sizitshele ukuthi ligwinywe umshini.”
Uthe ngesikhathi isisulu sifonela i-Call Centre yasebhange imali isuke isivele ikhishiwe.